Minneriya, safari tsara indrindra any Sri Lanka | Vaovao momba ny dia
Minneriya, safari tsara indrindra any Sri Lanka
Enric Gili | | Colombo, General, Ocio, Sri Lanka
Androany dia hilazako aminao ny iray amin'ireo fitsangatsanganana tena ilaina raha mandeha any Sri Lanka ianao, safari ao amin'ny valan-javaboahary Minneriya.
Minneriya dia iray amin'ireo valan-javaboary lehibe indrindra any Sri Lanka. Any amin'ny faritany avaratra-afovoan'ny firenena no misy azy ary 9000 hektara ny velarany.
Nahazo fiarovana ofisialy ho toy ny valan-javaboary iray izy tamin'ny 1997 noho ny fisian'ny bibidia be dia be eo amin'ny taniny sy hiarovana ireo farihy izay manome ny zavamaniry sy ny biby ao amin'ilay faritra.
Izy io dia faritra arovana tena manan-danja ary mifaninana amin'ny lazany miaraka amin'i Yala, Bundala ary Udawalawe, ilay malaza any Ceylon. Ny tsirairay amin'izy ireo dia miavaka amin'ny antony manokana, Minneriya tsy misy fisalasalana noho ny elefanta. Izay rehetra mandeha any Sri Lanka dia tsy maintsy mankany amin'ny valan-javaboary 1 na 2.
Ny fotoana tsara indrindra hitsidihana azy dia ny Jolay ka hatramin'ny Oktobra, ny main-tany any avaratry ny firenena. Mandritra ny fahavaratra dia vitsy ny orana ary terena hifindra any amin'ny tany mando sy farihy ireo biby.
1 Ahoana no ahatongavana any Minneriya?
2 Inona no ho hitanao ao Minneriya? biby
3 Inona no ho hitanao ao Minneriya? zavamaniry
Ahoana no ahatongavana any Minneriya?
Minneriya dia somary akaiky ny telozoro ara-kolontsaina fanta-daza an'i Sri Lanka, ireo toerana arkeolojika manan-danja 3 ao amin'ny firenena ary azo antoka fa ny faritra fizahan-tany indrindra any Ceylon (Sigiriya, Anuradhapura ary Polonnaruwa). Noho io antony io dia mora ihany ny mankany amin'io valan-javaboary io. Matetika, ireo mpandeha manao ny telozoro ara-kolontsaina dia misafidy ny handeha amin'ny safari any Minneriya.
Raha te hahatratra azy io ary hanao ny safari na hiditra ao anatiny, dia tsy maintsy manakarama ny serivisin'ny masoivoho tsy miankina ianao miaraka amin'ny fiara 4 × 4 sy mpamily, tsy afaka mandeha irery ianao (amin'ny 2015). Ny fiara 4 × 4 ihany no azonao afindra ao anatin'ny faritra arovana. Ny vidiny dia tsy tokony hihoatra ny $ 45 na $ 50 isan'olona. Amin'ny ankapobeny ny faharetan'ny fitsangatsanganana dia manodidina ny 3 na 4 ora, ampy handehanana mangina mamaky ny ala sy ny lemaka ary ny farihy.
Mora tokoa ny manao fifanarahana amin'ity serivisy ity raha vao eto amin'ny firenena isika, tsy mila manao fifanarahana ianao eto. Ny trano fandraisam-bahiny na hotely no hitantana ny fitsangatsanganana. Safidy iray hafa ny mandeha any amin'ireo tanàna akaiky ny fidirana amin'ny valan-javaboary ary manakarama ny maso ivoho any, amin'ny sisiny sy ny sisin-dàlana dia feno orinasa izay ho an'ny tolotra mitovy amin'izany hatrany hanaovana fitsangatsanganana.
Ny zavatra lojika indrindra dia ny hiditra ny valan-javaboary avy any Sigiriya raha jerena ny akaiky azy (10Km fotsiny), mamporisika anao aho hitsidika ny tranokala arkeolojika sy ny vakoka lovan'izao tontolo izao an'i Sigiriya mandritra ny maraina, manomboka maraina be, ary ny tolak'andro dia hifindra any Minneriya mankany mandehana safari. Sigiriya dia azo aleha amin'ny lamasinina, fiara na bus avy any Colombo (renivohitra) na avy any Kandy (tanàna faharoa lehibe indrindra ary eo afovoan'i Sri Lanka).
Tena tsara tarehy ny mahita ny masoandro milentika voahodidin'ny elefanta sy ny endrika mahavariana avy amin'ity valan-javaboary ity.
Safidy iray hafa azo atao ny manao ampahan'ny safari mitaingina elefanta. Ny sasany amin'ireo masoivoho dia manolotra an'ity serivisy ity, mandeha an-tongotra mamaky an'i Minneriya miaraka amin'ireo elefanta mamakivaky ny ala sy ala. Izaho manokana dia tsy haiko raha mendrika izany, aleoko nanao fiara fitsangantsanganana manontolo.
Inona no ho hitanao ao Minneriya? biby
Minneriya National Park dia malaza eran'izao tontolo izao noho ny elefanta karazany aziatika. An-jatony amin'izy ireo no any an'ala ary mora dia mora ny mahita am-polony maro amin'izy ireo amin'ny tolakandro iny ihany. Ny fiaraha-miaina eo amin'ny olombelona sy ireo biby ireo dia voajanahary tanteraka sy am-panajana, lasa zatra fiara am-polony maro tonga mitsidika azy ireo isan'andro izy ireo. Mbola izaho manokana dia mieritreritra fa be loatra ny fiara any amin'ny faritra misy biby marobe. Tsy haiko raha mametraka famerana faran'ny fidirana ao amin'ny valan-javaboary ny governemanta.
Mandritra ny fahavaratra (vanim-potoana maina amin'ny faritra) dia tonga in-1 na in-2 isan'andro ny elefanta hisotro rano ao amin'ny farihy lehibe, eo no ahitanao ireo elefanta akaiky.
Ankoatry ny elefanta, ny valan-javaboary koa dia be gidro, chameleons, flamingo ary karazam-borona, vorombola, ombidia rano, ... Misy koa leoparda, na dia sarotra be aza ny mahita azy ireo.
Amin'ny hektara vitsivitsy dia ahitanao ny karazana biby rehetra.
Inona no ho hitanao ao Minneriya? zavamaniry
Ny valan-javaboary Minneriya dia ao amin'ny ala mikitroka any Sri Lanka.
Ny zavamaniry ao amin'ny valan-javaboary dia ahitana ala maitso maitso maina, mifangaro amin'ny ahitra, faritra kirihitra ary tany mando. Ny faritra manjaka eto amin'ity faritra ity dia ny farihy sy ny kijana.
Ny sasany amin'ireo hazo misy ao Minneriya dia zanatany ao amin'ny nosy, izy ireo dia tsy hita afa-tsy eto amin'ity firenena ity. Ohatra ny hazo palmie Ceylon. Ny toetrandro mafana sy orana dia miteraka haben'ny hatsarana voajanahary tokana.
Avy amin'ny zavatra niainako dia afaka milaza aminao aho fa ny safari any Sri Lanka dia tsy azo ampitahaina amin'ny safari afrikanina fa traikefa an-tsoroka tanteraka izany raha mandeha any Azia atsimo atsinanana ianao. Araka ny efa nolazaiko teo aloha, raha nanakaiky ny telozoro ara-kolontsaina aho dia manoro hevitra anao handeha ho any Sigiriya ny maraina ary Minneriya ny tolakandro. Ny fidirana dia tsy dia mora vidy fa ao anaty safariora 2 na 3 ora dia hankafizanao ny sary sy ny biby ao amin'ny valan-javaboary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Colombo » Minneriya, safari tsara indrindra any Sri Lanka
Ny toerana mora indrindra eto amin'izao tontolo izao dia any Azia
Zavatra hita any Milan